SPM News: Somali 4.21.22
Published April 21, 2022 at 3:29 PM CDT
Xafiiska Baadhista Dawlada Dhexe ayaa eegaya dhimashada wiil dhalinyaro ah oo ku sugan Boos Celinta Hindida ee Santee Sioux ee Degmada Holt, Nebraska.Ashleigh Wabasha oo 19 jir ah, asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka, ayaa markii ugu dambeysay la arkay 27-kii Maarso, waxaana meydkeeda la helay Isniintii. Xafiiska Omaha ee FBI-da ayaa soo diray bayaan sheegaya in baaritaanka socda awgeed, aan wax faahfaahin ah laga bixin karin kiiska.FBI-da ayaa baareysa dambiyada ugu daran ee ka dhaca Dalka Hindiya.
Kiisaska cusub ee COVID-19 ee laga soo sheegay Iowa ayaa yara kordhay, laakiin tirada dadka cusbitaalka la dhigay ee cudurka ayaa yara yaraatay tirada dadka u baahan daryeelka degdegga ah ee dhibaatooyinka COVID-19 ayaa xitaa hoos u dhacay. Hadda waxa jira laba qof oo keliya oo ku haysta sariiraha ICU ee Iowa COVID-19, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Iowa.
Milkiilayaasha cusub ee beerta madadaalada ee Iowa ayaa sheegay in raacitaanka biyaha uu wiil ku dhintay sanadkii hore aysan dib u furmi doonin xagaagan. Bill Lentz, maareeyaha guud ee Adventureland ee Altoona, ayaa sheegay in saraakiisha beerta ay wali ka wada hadlayaan in raacitaanka Raging River waligiis dib loo furi doono. Michael Jaramillo oo kow iyo toban jir ahaa ayaa dhintay, walaalkii iyo aabihiisna waa ay dhaawacmeen ka dib markii uu la rogmaday doontii ay la socdeen, iyaga oo ku xannibay biyaha.Agaasimaha Adeegyada Degdegga ah ee Degmada Woodbury Andrew Donawa ayaa iscasilay kadib lix bilood oo uu shaqada ku jiray, sida uu sheegay Joornaalka Sioux City Journal.Gary Brown, oo ah agaasimaha mudada dheer ee Donawa ku guuleystey, ayaa u soo bandhigay inuu si ku meel gaar ah uga soo baxo hawlgabka si uu u buuxiyo booska ilaa Julaay 30, ama ilaa laga helayo bedelka.
Iibka gurigu wax yar ayuu ka kacay Iowa bishii hore, halka xogta qaranku ay muujinayso hoos u dhaca 2.7% ee iibka guryaha Maraykanka ee jira bishii March. Robin Anderson, oo ah madaxa dhaqaalaha gobolka Iowa ayaa sheegay in laga yaabo in gobolku uu wax yar ka fiicnaado xagga iibka.
Laakiin Anderson wuxuu sheegay in sahay la'aantu ay caqabad weyn ku tahay suuqa guryaha.